थाइराइडका बिरामीले खानै पर्ने खानेकुरा, सेयर गरेर अरूलाई पनि पढ्न दिनोस - Triveni Online
Home / Health / थाइराइडका बिरामीले खानै पर्ने खानेकुरा, सेयर गरेर अरूलाई पनि पढ्न दिनोस
Triveni Online February 11, 2019	Health Leaveacomment
५. थाइराइडको उपचारका लागि मरिच पनि धेरै फाइदाजनक मानिन्छ । कुनैपनि तरिकाले दैनिक मरिच सेवन गर्ने गर्दा धेरै लाभ पाउन सकिन्छ । ६. बदाम र ओखरमा पाइने सेलेनियम नामक तत्व थाइरोइडको उपचारका लागि धेरै उपयोगी मानिन्छन् । अझ हाइपोथाइरोइड ९थाइराइड हर्मोन वृद्धि हुनु० का लागि यो उपाय सबैभन्दा बढी प्रभावकारी साबित हुने गर्छ । ७. कागतीको पत्ता नियमित सेवन गर्ने गर्दा थाइरोक्सिन अत्याधिक मात्रामा बन्न पाउँदैन । त्यसकारण यसलाई दैनिक चियामा राखेर सेवन गर्दा धेरै राहत गराउँछ ।
Previous मात्र एक रात भिजाएर मेथी दाना सेवन गर्नुहोस ग्यास्ट्रिक चट !
Next पूजा गर्दा गर्नै नहुने १० कार्यहरु हेर्नुहोस् ! झुकिएर पनि गर्नु भएमा आइलाग्नेछ दुखको बज्रपात